साथीहरूसँग घडी 34
धर्म र नयाँ विचार के बीच आवश्यक मतहरू के हो?
प्रेरणा, विधि र निश्चितता।
यी भिन्नताहरू तथाकथित थिओसोफिस्टहरू वा नयाँ विचारधाराहरूको कुरा र कार्यहरूमा आधारित छैनन्, तर थिओसोफिस्टहरूको पुस्तक र नयाँ विचारका पुस्तकहरूमा आधारित छन्। वर्तमान समयका थिसोफिकल समाजका अधिकांश सदस्यहरू दावी गर्दछन् र अनुचित व्यवहार गर्दछन् जसरी धेरै नयाँ सोचका मानिसहरू गर्दछन्। व्यक्तिहरूको प्रत्येक समूहले मानव प्रकृतिको पक्ष देखाउँदछ जुन त्यस समयमा बाहिर काम गरिरहेको हुन्छ। थियोसोफीका सिद्धान्तहरू हुन्: कर्म, न्यायको व्यवस्था; पुनर्जन्म, दिमागको विकास र दिमागको माध्यमबाट शारीरिक र अन्य शरीरहरूको कुरा मानव शरीरमा जीवन यस शरीरमा संसारमा फर्कन्छ; मानवको सात गुणा संविधान, सिद्धान्तहरू र उनीहरूको अन्तर्क्रिया जो मानिसको श्रृंगारमा प्रवेश गर्छन्; मानवको सिद्धता, कि सबै मानिसहरू सम्भावित देवताहरू हुन् र यो सबैको शक्तिमा छ कि सबै भन्दा उच्च पूर्णताको अवस्थासम्म पुग्न र होशियारी र बुद्धिमानीसाथ ईश्वर, ब्रह्माण्ड दिमागको साथ एक हुनु; भ्रातृत्व, कि सबै मानिसहरु एकै ईश्वरीय स्रोतबाट आउँछन् र सबै मानिसहरु एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् र सारमा एकै भए पनि विकासको डिग्रीमा फरक छन्, र यो कि आत्मिकरुपमा सबैको कर्तव्य छ र एक परिवारका सदस्यको रूपमा एक अर्कासँग सम्बन्धित छ, र यो कि यसको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हो कि उसले आफ्नो शक्ति र क्षमता अनुसार अरुलाई मद्दत पुर्याउँदछ।
थिओसोफिस्ट र नयाँ विचारहरूको पुस्तकहरूमा वकालत वा सुझाव दिएका मनसाय व्यापक रूपमा भिन्न छन्। थेसोफिकल सिद्धान्तहरू द्वारा आग्रह गरिएको उद्देश्यहरूः कर्माको आवश्यकताहरू अनुरूप आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु नै कर्तव्य हो किनभने यो न्यायको कानूनले माग गरेको छ; वा किनभने त्यसो गरेर, एक राम्रो कर्म बनाउँछ; वा किनभने यो सहि छ which जसमा ड्यूटी डर बिना र इनामको आशा बिना गरिन्छ। अमरत्व वा सिद्धतालाई पर्खाइमा राखिएको छैन किनकि यसको प्राप्तिबाट व्यक्ति जिम्मेवारीबाट जोगिनेछ र यसको फलहरू रमाईलो गर्दछ, तर किनभने त्यसमा पुग्दा अरूलाई अज्ञानता, दु: ख र पीडामाथि विजय हासिल गर्न र उही लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उत्तम क्षमता हुन्छ। नयाँ विचारकलाई कार्य गर्न उक्साउने अभिप्रायहरू पहिले आफ्नै फाइदा हुन्, सामान्यतया शारीरिक फाइदाका लागि, र त्यसमा रमाइलोको निम्ति, र त्यसपछि अरूहरूलाई पनि ती प lines्क्तिहरूमा आफ्ना इच्छाहरू तृप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउन।
थेओसोफीले आफ्नो वस्तुहरूको प्राप्तिका लागि सल्लाह दिने विधिहरू जहाँ भए पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नु, अरूको भलाईको लागि निःस्वार्थ व्यवहार गरेर, बुद्धिको माध्यमबाट चाहनाहरूलाई नियन्त्रण गरेर, प्रबुद्ध भएर र आफ्नो समयको उचित मात्रामा समर्पण गरेर हो। पैसा र सिद्धान्तहरु को प्रसार को लागी काम। यो गरेको छ, पैसा वा कुनै प्रकारको शुल्क बिना। नयाँ विचार को विधिहरु शारीरिक लाभ र मानसिक सन्तुष्टि को प्रतिज्ञा गर्न को लागी हो, र पैसा को लागी विचार मा निर्देशन को पाठ्यक्रम को लागी र व्यावहारिक अनुप्रयोग को लागी शुल्क लिइन्छ।
अर्को भिन्नता के हो भने थिओसोफीका सिद्धान्तहरू सिद्धान्त र कथनको रूपमा निश्चित छन्; जबकि, नयाँ विचार समाजमा अस्पष्ट दाबीहरू गरिन्छन्, र पदहरूमा दर्शन र दर्शनमा निश्चितताको अभाव देखाईन्छ। नयाँ विचार शिक्षा कोमलता बोल्छ, यदि सबैमा, कर्म र पुनर्जन्मको। उनीहरूका केही लेखकहरूले सात सिद्धान्तहरू वा तिनीहरू मध्ये कुनैको बारेमा बोल्छन्; तिनीहरू मानिलिन्छन् कि मानिस उत्पत्ति र तथ्यमा ईश्वरीय छ र पुरुषहरू दाजुभाइ हुन् भनेर विश्वास गर्दछन्। तर यी सबै नयाँ विचार शिक्षाहरूमा निश्चितताको अभाव छ जुन थियोसोफिकल पुस्तकहरूमा भएका प्रत्यक्ष र आग्रही बयानहरू भन्दा स्पष्ट भिन्नता हो।
त्यसपछि विशिष्ट विशेषताहरू: त्यो हो कि थिओसफीका अनुयायीहरूलाई ईश्वरको बोध गराउने उद्देश्यका लागि निहित स्वार्थ र सेवा हो, जबकि नयाँ विचारलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य भनेको त्यस्ता जानकारीहरू व्यक्तिगत, भौतिक फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु हो। र फाइदा। थिओसफीलाई पछ्याउनेको काम गर्ने विधिहरू बिना कुनै तनावका शिक्षाहरू फैलाउनु हो; जबकि, नयाँ विचारकर्ताले भने कि मजदूर उसको भाडामा योग्य छ र उसले सुविधाहरूका लागि रकम लिन्छ, वा कथित फाइदाहरू, प्रदान गरियो। थिओसोफीका अनुयायीसँग निश्चित वस्तुहरू र सिद्धान्तहरू हुन्छन् जुन तिनीहरू आफैंमा भिन्न छन्, जबकि नयाँ विचारको पालना गर्ने सिद्धान्तको रूपमा खासै हुँदैन, तर आशावादी र हंसमुख स्वभाव भएको छ र विश्वस्त छ कि उसले आफूले चाहेको सबै प्राप्त गर्नेछ। यी सिद्धान्त र पुस्तक अनुसार फरक छन्, तर तथाकथित theosophist मानव र कमजोर छ र साथै नयाँ विचारको; प्रत्येकले आफ्नो प्रकृति अनुसार उसको खास विश्वास वा विश्वासको आधारमा काम गर्दछ।
जहाँ थियोसोफी सुरु हुन्छ नयाँ सोच समाप्त हुन्छ। थियोसोफी जीवनको कर्तव्यबाट सुरू हुन्छ, र भौतिक संसारमा सिद्धतासम्म पुग्ने लक्ष्य राख्दछ; र त्यो पूर्णता मार्फत, आत्मिक संसारमा पूर्णता। नयाँ चिन्तन व्यक्तिको ईश्वरीय विश्वासमा हर्षोल्लास र विश्वासको साथ सुरु हुन्छ, र शारीरिक, धन, समृद्धि र खुशीको साथ अन्तमा देखिन्छ - कहिलेकाँही र समयको लागि।
क्यान्सरको कारण के हो? त्यहाँ यसको लागि कुनै ज्ञात उपचार छ वा उपचारको केही विधि पत्ता लगाउनु अघि यसको औषधि प्रभावकारी हुन सक्छ?
त्यहाँ क्यान्सरको तत्काल र टाढाका कारणहरू छन्। तत्काल कारणहरू ती हुन् जुन अहिलेको जीवनमा ईन्जेन्डर्ड छन्। रिमोट कारणहरू उत्पत्ति हुन्छन् र अघिल्लो मानवीय जन्महरूमा दिमागको कार्यबाट आउँदछन्। क्यान्सर देखा पर्ने तत्काल कारणहरू जस्तै कुरुप वा निरन्तर जलन हो, जसले रक्तसञ्चार, ऊतकको प्रसारमा बाधा उत्पन्न गर्दछ र जसले माटोको विकासलाई अनुकूल बनाउँदछ, क्यान्सर जीवाणुको रूपमा विश्वास गरिन्छ, वा ती हुन सक्छ अनुचित खाद्य पदार्थहरूको कारणले हुन सक्छ जुन शरीरलाई समाहित गर्न वा उत्सर्जित गर्न असमर्थ छ र जसको कारणले क्यान्सर जीवाणुको विकास हुन्छ, वा त्यो रोग संयम, दमन र हत्याको कारण हुन सक्छ, तर यौन अभ्यासहरूको समयमा महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थको शरीरमा कायम राख्न। । महत्त्वपूर्ण तरलताको जीव जीवाणुहरूको शरीरमा मार्ने, राख्ने र स्कलन गर्ने उर्वर माटोले क्यान्सर जीवाणुलाई अस्तित्वमा बोलाउँछ; अभ्यास जारी राखेर शरीर क्यान्सरयुक्त विकासको साथ प्रशस्त हुन्छ। फेरि त्यस्तै अवस्था शरीरको असक्षमताले परिपक्वतामा ल्याउन असमर्थता द्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जुन गर्न जीवाणु मर्दछ र क्षय हुन्छन् र शरीर भित्र रहन्छ जुन आत्मसम्मान वा उत्सर्जन गर्न असमर्थ छ।
टाढाका कारणहरू दिमागले यसका कार्यहरू अघिल्लो अवतारहरूमा ल्याउँदछन् जसमा दिमागले अत्यधिक र भोगमा भाग लिन्छ, तर जुन अवतारमा यसले रोपिएको फसल काट्न सक्दैन, त्यस्तै गरी जसमा दुर्व्यसनी भएकाहरू आजको जीवनमा विकृत र गलत यौन प्रचलनहरू अब कटनी गर्न सक्दैनन्, तर रोप्दै छन्, भविष्यको कटनीको कारणहरू - जबसम्म उनीहरूले वर्तमान सोच र कार्यद्वारा विपरित कारणहरू सेट गर्दैनन्। जबसम्म क्यान्सर शारीरिक रूपमा स्थानान्तरण वा ट्रान्सप्लान्ट हुँदैन, क्यान्सरका सबै केसहरू कर्मिक कारणहरूले हुन्; भन्नु पर्दछ, तिनीहरू कार्य र दिमागको इच्छा र एकको शरीरको क्षेत्र मा इच्छा बीचको अन्तर्क्रियाको कारण हो। दिमाग र चाहना बीचको यो कार्य वर्तमान जीवनमा वा अघिल्लो जीवनमा भएको हुनुपर्छ। यदि यो वर्तमान जीवनमा भएको छ भने, यो क्यान्सर को तत्काल कारण को रूप मा मान्यता हुनेछ जब ध्यान यो निर्देशित हुन्छ। यदि यी वा यस्तै कुनै कारणहरू वर्तमान जीवनमा स्थापित गरिएको छैन, जसमा क्यान्सर देखा पर्दछ, तब यो रोग टाढाको कारणले हो जुन चिन्न सकिन्छ। एक एक समय को लागी कानूनको बिरूद्ध कार्य गर्न सक्छ, मात्र, तर त्यो समय मा जाँच गरीन्छ। क्यान्सर कोष र यसको विकास नष्ट हुन सक्छ, तर क्यान्सर कीटाणु शारीरिक छैन र यसलाई कुनै पनि शारीरिक तरिकाले नष्ट गर्न सकिदैन। क्यान्सरको कीटाणु सूक्ष्म हो र कोशिकाको क्यान्सर जीवाणुको रूपमा देखाउँदछ, यद्यपि कोष बढेर विकसित हुन्छ भन्ने फाराम हो। क्यान्सर सेल र कीटाणुको उपचार र शारीरिक माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ क्यान्सर को उपचार को लागी एक उपचार छ, र उपचारहरु लाई असर गरीएको छ। उपचार सालिस्बरी उपचार द्वारा गरिएको छ। यो उपचार चालीस वर्ष भन्दा बढीको लागि परिचित छ, तर तुलनात्मक रूपमा थोरै चिकित्सकहरूले यसलाई प्रयास गरेका छन्। रोगहरूको सालिसबरी उपचारले चिकित्सा पेशालाई मन पराउँदैन। केहि जसले यो निष्पक्षताका साथ प्रयास गरेका छ, धेरै जसो तथाकथित लाइलाइ रोगहरु को उपचार मा उल्लेखनीय परिणाम छ। सालिस्बरी उपचारको आधार भनेको राम्रोसँग ब्रुयल दुबैको मासु खानु हो जसबाट सबै बोसो र फाइबर र संयोजी ऊतक हटाइएको छ, र जुन खाने सँगसँगै तातो पानी पिउनु हो र खाना खानु भन्दा साढे एक घण्टा भन्दा कम । यो उपचार धेरै चिकित्सकहरु को लागी धेरै सरल र सस्तो छ। यद्यपि यो उपचार, जब यो होशपूर्वक लागू हुन्छ, जरामा प्रहार गर्दछ, र प्रभाव लगभग सबै ज्ञात रोग को उपचार। राम्रोसँग पकाएको दुब्ला गाईको मासु, जसबाट टिश्यु र फ्याट हटाइएको छ, र पानीले स्वस्थ मानव जनावरहरूको शरीरको मर्मतका लागि सरल र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान गर्दछ। दुब्ला गाईको मासु खाने र शुद्ध पानी पिउने शारीरिक शरीर र यसको सूक्ष्म समकक्ष, फारम शरीर लाई असर गर्दछ। दुबला मासुले कुनै जीवाणुको विकास र विकासको लागि अनुकूल सामग्रीको आपूर्ति गर्दैन जुन शरीरमा रोग सार्न सक्छ जुन दुब्ला मासु लिन्छ। जब खानाको आपूर्तिलाई कुनै रोगबाट रोकिन्छ र शरीरमा खानेकुरा सेवन गरिन्छ जुन रोगले प्रयोग गर्न सक्दैन, तर शरीरलाई स्वास्थ्यकर छ भने, रोगको मृत्यु हुन्छ। यसैले जब दुबै मासु शरीरमा लगिन्छ, यसले क्यान्सर वा अन्य रोगका कीटाणुहरूका लागि अनुकूल खाना आपूर्ति गर्दैन, र यदि अन्य खाना रोक्दैन भने, शरीरमा अस्वस्थ वृद्धि बिस्तारै मर्दछ र भोकमरीको प्रक्रियाबाट हराउँछ। यसले वर्षौं लिन सक्दछ र शरीर emaciated देखा पर्न सक्छ र कमजोर र शारीरिक रूपमा थकित महसुस गर्न सक्दछ। यो अवस्था शरीरको बिरामी भागहरूको सुस्त अवस्थाका कारणले हो, तर यदि शरीरमा उपचार जारी रह्यो भने स्वास्थ्य फेरि प्राप्त हुन्छ। प्रक्रियाको क्रममा के हुन्छ यसले पुरानो बिरामी शारीरिक शरीरलाई बिस्तारै मर्ने अनुमति दिइन्छ र यसलाई हटाइन्छ, र यसको ठाउँमा त्यहाँ हुर्किएको र बिस्तारै विकास हुँदै गइरहेको छ, दुबै पातलो मासुमा बनेको अर्को शारीरिक शरीर। उमालेको पानी पिउनु एक घण्टा अघि र खाना पछाडि तातो लिइएको मासुको खाना जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, र मासु तातो पानी पिए बिना र रोगको उपचार गर्न खान हुँदैन। धेरै मात्रामा तातो पानी पिउँदा एसिडहरू र हानिकारक पदार्थहरूलाई बेअसर गर्दछ र तिनीहरूलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्छ, र त्यो पानीमा यो कुरा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ। मासु शरीरको खाना हो; पानी शरीर सिंचन र शुद्ध गर्दछ। दुब्ला गाईले शरीरको स्वस्थ कोशिका निर्माण गर्दछ, तर मासुले अदृश्य क्यान्सर जीवाणुलाई छोउन वा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्न सक्दैन। तातो पानीले यो गर्छ। तातो पानीले क्यान्सर जीवाणु र शरीरमा भएका अन्य कीटाणुहरूलाई असर र परिवर्तन गर्दछ र यी शरीरको आवश्यकतामा समायोजित गर्दछ।
यस आधारमा निर्मित शरीर स्वच्छ र पौष्टिक छ र दिमागको लागि राम्रो कार्य उपकरण हो। यस्तो उपचारले न केवल कसैको शारीरिक र सूक्ष्म शरीरलाई परिवर्तन र स्वस्थ बनाउँदछ, तर इच्छाहरू पनि प्रभावित, रोकथाम र तालिम प्राप्त हुन्छ। रोगहरूको केवल सालिस्बरी उपचारले प्रत्यक्ष शरीरको साथ काम गर्दछ जुन क्यान्सर सेलको क्षेत्र हो र सूक्ष्म शरीर जुन क्यान्सर जीवाणुको आसन हो। सालिस्बरी उपचारद्वारा दिमाग पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तालिम पाएको हुन्छ किनभने शरीर र इच्छालाई नियन्त्रण गर्नका लागि पर्याप्त दृढ निश्चय र दिमागले अभ्यास गरेको हुनुपर्दछ र उपचारको लागि कडाईका साथ चाहना राख्नुपर्दछ। धेरै उपचारमा असफल हुन्छन् किनकि उनीहरूले यसलाई समात्दैनन् र मानसिक असन्तुष्टि र विद्रोहको कारण जुन प्राय: प्रयास गर्नेहरूमा देखा पर्दछन् जुन उनीहरूले जित्दैनन्। यदि विद्रोह शान्त र असन्तुष्ट बिरामी र मनको विश्वस्त मनोवृत्ति द्वारा प्रतिस्थापित गरियो भने, एक उपचार अनिवार्य रूपमा परिणाम हुनेछ। आफ्नो शरीरलाई व्यावहारिक विधि अनुसार तालिम दिएर दिमाग आफैं अपरेसनबाट निर्देशित हुन्छ र शरीरको मात्र होइन तर आफ्नै असन्तुष्टता र बेचैनीमा पनि प्रभुत्व जान्छ। जब त्यहाँ शरीर र दिमागको बिचमा सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ कि शरीरमा घर भेटिएन। क्यान्सर जीवाणु र कोषले रोग निम्त्याउँदैन जबसम्म शरीरको गठनले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न असमर्थ हुन्छ। त्यहाँ थुप्रै क्यान्सर जीवाणु र कोषहरू लगभग सबै मानव शरीरमा छन्। वास्तवमा असंख्य कीटाणुहरू मानव शरीरमा झुल्किन्छन्। यी मध्ये कुनै पनि विषाणु रोग निम्त्याउँदछ यदि शरीरको अवस्था जस्तो छैन भने कीटाणुहरूलाई व्यवस्थित राख्नेछ र राम्रो संगठित शरीरको संरक्षण गर्दछ। रोगका कीटाणुहरूले शरीरमा अज्ञात टोम भनेका छैनन्, तर शरीर र दिमागले अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था प्रदान गरेका छैनन् जसले यी कीटाणुहरूलाई विशेष रोगको रूपमा संसारका लागि चिनिन दिनेछ। तिनीहरू कुनै पनि समयमा प्रमाणहरूमा डुबाउन सक्छन् जब सम्भावित रोगको बारेमा दिमागमा जागरूक हुन्छ, र रोग सम्बन्धी अवस्थाहरू अनुचित खाने र बस्ने द्वारा प्रदान गरिन्छ।
क्यान्सर जीवाणु र कोशिका इतिहास र मानव जातिको विकासको अवधिसँग सम्बन्धित छ जब मानव शरीर द्वि-यौन थियो। त्यस समयमा यो रोगलाई क्यान्सर भनिन असम्भव हुने थियो किनभने शरीरको निर्माणमा प्रयोग गरिएको त्यो सामान्य कोष नै हो। हाम्रो वर्तमान दौड यसको विकासको एक बिन्दुमा पुगेको छ जसले यसलाई उही हवाईजहाजमा ल्याउँछ जुन दौड यसको आक्रमणमा पारित भएको थियो, अर्थात्, जुन विमानमा द्वि-यौन नर - महिला शरीरहरूको आक्रमण वा विकास भएको थियो यौन पुरुष शरीर र महिला निकायहरू अब हामी जान्दछौं।
शारीरिक शरीर निर्मित र जीवाणुहरूको निरन्तर सिर्जना र विनाश द्वारा बनाईएको हो। यो कीटाणुहरूको लडाई हो। निकाय सरकार को एक निश्चित रूप मा स्थापित छ। यदि यसले सरकारको आफ्नो रूपलाई सुरक्षित गर्दछ भने यसले व्यवस्था र स्वास्थ्य कायम गर्दछ। यदि आदेश सुरक्षित छैन भने, विपक्षी दल सरकारमा प्रवेश गर्छन् र विघटन निम्त्याउँछन्, यदि उनीहरू क्रान्ति वा मृत्युको कारण गर्दैनन्। शरीर निष्क्रिय वा निष्क्रिय रहन सक्दैन। जीवाणुहरूको सेना जसले शरीर र अन्य कीटाणुहरूको सेनाहरू निर्माण गर्दछ जसले यसलाई प्रतिरोधात्मक जीवाणुहरूको आक्रमण र आक्रमणको बिरूद्ध बचाउँदछ र ती आक्रमणकर्ताहरूलाई समात्न र आत्मसात गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। यो तब गरिन्छ जब शरीरले स्वास्थ्यकर खाना खान्छ, शुद्ध पानी पिउँछ, ताजा हावाको गहिरो सास फेर्छ, र स्वस्थ विचारहरूको मनोरन्जन गर्दछ र सही मनसाय अनुसार प्रभाव र कार्यहरू सोच्न प्रयास गर्दछ।